SIFUMANA ENYE IPAIL YENKUNKUMA YABANTWANA BEMUVI - IKLABISHI PATCH ABANTWANA
Iibhetri Ze-Lithium Ion
Sifumana enye iPail yeNkunkuma yabantwana beMuvi, abantu abadala abancinci bayavuya
Kwiindaba ezingaqhelekanga, kwabhengezwa ukuba UMichael Eisner Inkampani yokuvelisa, Inkampani yaseTornante , Ikhulisa imovie yango-1980s kubalinganiswa bekhadi lokuthengisa, i-Garbage Pail Kids. Oku kuya kuba yimiboniso bhanyabhanya yesibini; Kwakukho ingxelo-yesenzo esenziwe ngo-1987, kwaye bendinokuyisebenzisa njengeyona nto iphambili, kodwa ibingasasebenzi. (Kungoko uLoogie Leia, kuba: ukubaluleka kwe-geek!) Kuba yayiyiParbil Pail yaBantwana IRL . Ke, kuhle! Bendingazi ukuba kukho umnxeba omkhulu woku, kodwa ngokuqinisekileyo! Inkunkuma yePail yabantwana bhanyabhanya!
Iindaba ezivela Umhla wokugqibela ayibonisi ukuba ngaba le iya kuba yenye yemiboniso bhanyabhanya esebenzayo njengasekuqaleni, eyayibonakala ngathi Ukungqubana okumangazayo Ibonisa i-motley band yabantwana abakhubazekileyo-onodoli bonke abajongeka njengeenguqulelo zikaChuckie (endinguye Ndiyoyika ). Kodwa iya kulawulwa ngu YINJA , okwangoku owenza ujikelezo lwe-intanethi kunye nefilimu yakhe emfutshane, Entsha iGuacamole , Kwaye yabhalwa ngu UMichael Vukadinovich , othengise nje umbhalo wakhe Amashwa amathathu eGeppetto ukuya Fox .
Kulabo abangaqhelananga ne-Garbage Pail Kids, babeluphawu lwe-badassery ngasekupheleni kweminyaka yoo-1980. Ukuba ubungomnye wabo bantwana babezama ukufumana i-grosser, impendulo ebambekayo ngakumbi kwi-Cabbage Patch Kids eyaziwayo (okanye engenatyala) okanye ukuthuthumbisa amantombazana awayene-Cabbage Patch Kids-ke ngawo la makhadi oweza nawo esikolweni , othengise ngayo ngexesha eliyimfihlo enkulu, phantsi kwetafile xa utitshala ebhala ebhodini. Yayiyinto ethe ngqo yeCabbage Patch Dolls (eneneni eyayinokuthi ithathe umhlaba kwii-1980s zokuqala) kwaye zenziwa ngo-1985 ngumdwebi wekhathuni ophumelele amabhaso kaPulitzer. Ubugcisa beSpiegelman . Kwaye babengaqhelekanga. Kwaye ecekisekayo. Batyhala yonke imida, bawela yonke imigca, kwaye bebeyile nto yabantwana abapholileyo abatshaya imidiza emva kwesikolo bebabuyisele izandla emini. Nantsi eminye imifanekiso:
Ke, sifumana enye i-Garbage Pail Kids movie, kwaye nabani na owayekwibanga lesikolo kwiminyaka yoo-1980 ngokuqinisekileyo uyakonwaba… okanye sizakucinga nje, Uhhhhh, ngokuqinisekileyo! Ndiyaqikelela ndizakuya kubona oko… esiswini esingenanto… Mhlawumbi!
umbala omdaka we m & m
(nge Umhla wokugqibela )
Ulouis C K
Abafazi Be-Badass Kwimbali
uyenza njani lava yobuxoki
ukupheliswa kwesipho somdlalo bhanyabhanya kuchaziwe
I-star trek spock kunye ne-uhura
mayim bialik isayensi kunye nenkolo
imidlalo kunye nabasetyhini abaphambili 2016
Iitopu zetv ngendlela
ghost shark 2: imihlathi yedolophu